နွေရာသီတွင် အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် အသားပက်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ရန် အရေပြားထိန်းသိမ်းနည်း ၅ ချက် - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon မှ ရေးသားသည်။ 02/07/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
သင့်တွင် အသားပက်ခြင်း ၊အသားရေခြောက်ခြင်း စသည့်ပြသနာများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပါသလား။ သို့မဟုတ်နွေရာသီတွင် သင့် အသားရေကို ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲ တွေးပူနေပါသလား။
အကယ်၍သင်သည် အသားရေထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာတွင် အခက်အခဲရှိနေပါက အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များက သင့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ပူအိုက်သော ရာသီတွင် အသားရေထိန်းသိမ်းနည်းများ
၁။ ရေပူနှင့်ကြာရှည်စွာရေချိုးခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
အလုပ်ပင်ပန်းသည့်နေ့ရက်များတွင် ရေပူနှင့် စိမ်ပြေနပြေရေချိုးခြင်းသည် သင့်အတွက်အပန်းပြေလိမ်မည်။ သို့သော် ၎င်းသည် သင့်အရေပြားတွင် ရှိသင့်သော အဆီဓါတ်များကို ဖယ်ရှားပေးသည့်အတွက် ကြက်သီးနွေးရေနှင့် ချိုးခြင်းလောက် သင့်အရေပြားအတွက်မကောင်းပါ။
အရေပြားတွင် သဘာဝအဆီဓါတ်ရှိမှသာ သင့် အရေပြားစိုပြေနေမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ရေနွေးဖြင့် တနေ့လျှင် ၅-၁၀ မိနစ်ခန့်သာရေချိုးသင့်သည်။
၂။ ညင်သာစွာ သန့်စင်ပါ။
နွေရာသီတွင် ရာသီဥတုကြောင့် ချွေးထွက်များပြီး ဖုန်ထူသောအခါ သင့်ကိုယ်သင်သန့်စင်ရန်ပိုလိုအပ်သည်ဟု ထင်ပါလိမ့်မည်။ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် အနံ့ပြင်းပြင်းပါသော ဆပ်ပြာများသည် သင့်အရေပြားရှိသဘာဝဆီများကို ခမ်းခြောက်စေသည်။
ထို့ကြောင့် အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်ရန် ရိုးရိုးဆပ်ပြာကိုသာ သုံးပါ။ ဆပ်ပြာမပါသော၊ အရက်ပြန်မပါသော၊ အနံ့မပါသော သန့်စင်ဆေးရည်များက ပိုကောင်းပါသည်။ ညင်သာစွာပွတ်တိုက်ဆေးကြောပါ။
သင့်အရေပြားဆဲလ်အသေများကို ဖယ်ရှားရန် ဆားကြမ်းဖြင့်ချေးချွတ်ခြင်းကို ၁ပတ်လျှင် ၁ကြိမ် ၂ကြိမ် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင့်အရေပြားကခြောက်သွေ့နေလျှင် ပိုပြီးခြောက်မသွားစေရန်သတိပြုထိန်းသိမ်းရမည်ဖြစ်သည်။
၃။ သင့်အရေပြားကို စိုစွတ်နေအောက်ထားပါ။
မည့်သည့်အသားရေမျိုးမဆို ရေဓါ်ပြည့်ဝနေဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသားခြောက်သူများသည် ရေဓါတ်ပြည့်ရန်ပိုလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ရေချိုးပြီးချိန်နှင့် မျက်နှာနှင့် လက်တို့ကို ဆေးကြောပြီးချိန်တွင် အစိုဓါတ်ထိန်းခရင်မ်ကို လိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ အရေပြားတွင်းသို့စိမ့်ဝင်ရန် ၅ မိနစ်ကြာမျှအချိန်ယူလိမ်းပေးပါ။ နွေရာသီတွင် ချွေးထွက်များနေသော်လည်း သင့်အရေပြားအတွက် အစိုဓါတ်ထိန်းခရင်မ်သုံးရန်လိုအပ်သည်။
၄။ အမွှေးအမျှင်များရိတ်ရာတွင် စနစ်ကျမှုရှိပါစေ။
သင်သည်မုတ်ဆိတ်မွေး ခြေသလုံးနှင့် ဂျိုင်းမွေးများရိတ်ရာတွင် အရေပြားကို ထိခိုက်ပွန်းပဲ့နိုင်သလို အရေပြားကိုခြောက်သွေ့စေနိုင်ကြောင်းသိထားသင့်သည်။ ဠင်းသည် သင့်အရေပြားရှိသဘာဝအဆီများကိုလျော့နည်းစေသည်။
ထို့ကြောင့် အမွေးမျှင်များကိုရေချိုးပြီးချိန်မှသာရိတ်သင့်သည်။ ရိတ်ရာတွင် သင့်အရေပြားထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်ရန် ခရင်မ်တခုကိုအရင်လိမ်းပြီးမှ အမွေးပေါက်သော ဦးတည်ဘက်အတိုင်းရိတ်ပါ။ ထက်လွန်းသောဘရိတ်ဓါးကိုသုံးခြင်း၊ ရိတ်ပြီးသားနေရာကိုထပ်ခါတလဲလဲရိတ်ခြင်းအပြုရ။ ဘရိတ်ဓါးကို မှန်မှန်လဲပေးပါ။
၅။ နေရောင်ကာခရင်မ်ကို လိမ်းပါ။
သင့်ခန္ဒါကိုယ်ကို အရေပြားကကာကွယ်ပေးထားသည်ဖြစ်ရာ သင့်အရေပြားကိုလည်းကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ နေလောင်ထားသော အသားရေသည် ဖက်ရှင်တမျိုးအားဖြင့် ကြည့်ကောင်းသည်ဟုယူဆနိုင်သော်လည်း ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည် သင့်အရေပြားကိုပျက်စီးစေခြင်း၊ နေလောင်စေခြင်းနှင့် အရေပြားကင်ဆာဖြစ်စေခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သည်နွေရာသီတွင် နေရောင်ဒဏ်ကို ပိုခံရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် SPF ၃၀နှင့် အထက်ရှိသော နေရောင်ကာခရင်မ်ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။ နေရောင်နှင့် ထိတွေ့မှုများလေလေ SPF ကို ပိုများများသုံးရလေဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အင်္ကျ ီလက်ရှည်ဝတ်ခြင်းဖြင့်လည်း သင့်အရေပြားကိုကာကွယ်သင့်သည်။
အချုပ်ဆိုရသော် ပူအိုက်သောရာသီတွင်သာမက မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို သင့်အရေပြားကျန်းမာစိုပြေနေမှ သင့်အသွင်အပြင်လည်းလှပတင့်တယ်နေပေလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် နွေရာသီသည် သင့်အရေပြားအတွက် ထိခိုက်မှုအများဆုံးနှင့် အသားရေခြောက်သူများအတွက် အထူးသတိထားသင့်သောအချိန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
1. Winter Skin Care:6Tips for Dry, Chapped Skin. http://www.webmd.com/beauty/features/winter-skin-care-6-tips-dry-chapped-skin#1. Accessed December 26, 2016.
2. Skin Care for Dry Skin. http://www.webmd.com/beauty/dry-skin-13/cosmetic-procedures-skin-care-dry-skin. Accessed December 26, 2016.
3.6Quick and Easy Dry Skin Relievers. http://www.webmd.com/beauty/features/6-tips-relive-dry-skin-fast#1. Accessed December 26, 2016.